Banaanbax Lagu Dalbanayay in Colaada Xaradheere La Joojiyo Oo Cadaado Lagu Qabtay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Banaanbaxani Nabadeed oo ay soo abaabushay wasaarada arrimaha bulshada Maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Ximan iyo Xeeb ayaa lagu dalbanayay in la joojiyo colaadda dadka walaalaha ah ku dhexmartay deegaanka Warshubo ee hoostagta degmada Xaradheer, iyadoo lagu xoojinayay dadaalada nabadeed.
Qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Cadaado iyo mas’uuliyiinta Ximan iyo Xeeb ayaa ka qayb galay banaanbaxa, waxaana cod dheer loogu baaqay bulshada Gobolada dhexe oo dhan inay u istaagaan xal ka gaaridda colaadaas.
Wasiirka arrimaha bulshada maamulka Ximan iyo Xeeb Cumar Maxamed Diiriye oo banaanbaxaasi ka hadlay ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay sameynayaan talaabo walba oo ay awoodaan si looga hortago dagaal kale oo soo laabta.
Gudoomiyaha Baarlamanka Maamulka Ximan iyo Xeeb C/laahi Faarax Sandheere ayaa isna xusay in wadahadal dhinaca Taleefanka ah ay la sameeyeen Nabadoonada iyo waxgaradka Guriceel iyo Dhuusamareeb ayna ku balameen in si wada jir ah deegaanka Colaaddu ka dhacday loogu baxo si xal nabadeed loo gaaro.
Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa wafdi u dirtay deegaanka colaaddu ka dhacday si ay halkaas waan waan nabadeed kaga bilaabaan.